Gigolo job consultancy in indiaGuddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Cali Gacal ayaa sheegay inay Xildhibaanada Galmudug u codeeyeen Maasaaniyadda lasoo gudbiyey isla markaasna ay hadda wixii ka dambeeyo tahay mid ansax ah. Miisaaniyadda Maamulka Galmudug ayaa waxay sanadkii 2018 aheyd 8 Malyan, waxayna sare u kacday 50% marka la fiiriyo Miisaaniyadda sanadkaan 2020.
Degdeg:- Xildhibaanada Galmudug oo la isugu yeeray Kulan aan caadi ahayn + Shir hadda socda. January 23, 2020 marqaan Faalloyinka , Soomaliya , Wararka maanta 0 Kulan deg deg ah ayaa maanta la isugu yeeray Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug, kaasi oo ka mid ah Fadhiyada joogtada ah ee Baarlamaanka oo ay ka maqan ...
DHAGEYSO Liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug oo la shaaciyey + Magacyada iyo beelaha Published on January 10, 2020 by Admin · No Comments Wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in la baahiyey liiska xildhibaannada cusub ee Galmudug ee soo dooran doona hoggaanka maamulkaasi.
Jan 30, 2020 · Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee garabka Madaxweyne Xaaf ayaa maanta waxaa ay doorteen Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi, kadib doorasho ka dhacda Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.Xareed Cali Xareed ayaa waxaa loo doortay Gudd
Jan 08, 2020 · Soo xulista xildhibaanada Galmudug oo muddo dheer qaadatay ayaa waxaa haatan ay u muuqataa in la soo afjaray khilaafyadii jirey inkastoo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf uu diidan yahay qaabka ay u socdaan howlaha maamul dhisida Galmudug.
This service is unavailable for your account ps4 broadcast
Jan 10, 2020 · Liiska Xildhibaanada Baarlamaanka Cusub Ee Galmudug Oo La Shaaciyay Iyo Qabiilada Ay Ka Soo Kala Jeedaan. January 10, 2020. Share 0.
Jan 10, 2020 · Jan 10, 2020 - Aragtiyood. Guddiga farsamada maamul u sameynta Gamudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamanka Galmudug oo muddo la sugayey. Liiskan ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20-ka xildhibaan ee Ahlu-Sunna iyo 63 xildhibaan oo ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha.
Jun 20, 2015 · 60-ka xildhibaan ee la daabacay magacyadooda ayaa qeyb ka ah 85 xildhibaan oo uu ka koobnaan doono maamulka Galmudug, iyada oo xildhibaanada dhiman lasoo daabici doono magacyadooda maalmaha soo socda. Hoos Ka Akhri Liiska Xildhibaanada
Jan 11, 2020 · Xildhibaanada cusub ee Galmudug waxaa si weyn ugaga soo horjeestey madaxweynahii Wakhtigiisu dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf isagoo sheegay inay yihiin xildhibaano been abuur ah, Waxaana Xildhibaanada la bedelay ka mid ah guddoomiyihii baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
[ March 4, 2020 ] DAAWO VIDEO Xog Ciidanka Haramcad ee Turkiga Dhisay Iyo Awooda Ciidanka Somaliya Soo Laabatay. Faalloyinka [ March 3, 2020 ] Degdeg:- Xildhibaanada Kenya ee Mandheera oo saacado uqabtay in Janan uu uga baxo Magaaladooda.
Guddoonka Baarlamaanka Galmudug ayaa maanta magacaabay Guddiga Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka, kaddib kulan maanta magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen Xildhibaan Baarlamaanka Galmudug. Kulanka ayaa talo soo jeedin looga dhageystay Xildhibaanada, waxaana dood laga yeeshay xubnaha ka mid noqonaya Guddiga oo lagu salleeyay nidaamka awood qeybsiga beelaha. Xubnaha Guddiga ...
Xildhibaanada Galmudug oo loo sheegay inay berri dooranayaan Madaxweynaha 01 February 2020 Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee garabka dowladda ayaa waxaa lagu wargeliyay inay maalinta berrito ah u soo diyaargarooban Doorashada Xafiiska Madaxtooyada Galmudug.
Inta badan xildhibanada cusub ee Baarlamaanka 2-aad ee Galmudug ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Xildhibaanadda Galmudug oo tiradoodu tahay 89 Xubnood ayaa waxaa la shaaciyay shalay 83 ka mid ah, waxaan wali dhiman 6 xubnood kuwaasoo oo aan wali magacyadooda lasoo gudbin Dadka kusoo baxay. Xildhibaanada cusub ayaa lagu wadaa iney …
Warqadda lagu shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee garabka madaxweyne Xaaf ayaa lagu cadeeyey magacyada xildhibaanada iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan. Liiskan cusub ayaa goor dhaw looga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, oo uu ku suganyahay madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Jan 15, 2020 · Musharaxiinta xilka madaxweynaha Galmudug ayaa maanta sheegay dhankooda in xildhibaanada aysan haysan wax aqoonsi oo dhibaato badan lagu hayo. Wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaanada shuruud looga dhigay doorashadda mid kamid musharaxiinta xilka gudoomiyaha Baarlamaanka kadibna loo ogolaan doono kaarka.
Jan 30, 2020 · Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee garabka Madaxweyne Xaaf ayaa maanta waxaa ay doorteen Madaxweyne ku xigeenka cusub ee maamulkaasi, kadib doorasho ka dhacda Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa waxaa loo doortay Shiikh Ibraahim Shiikh Xasan Guureeye.
Feb 01, 2020 · Senator MUUSE SUUDI YALAXOW ayaa Habaaray Xildhibaanada Somalia, isagoo ka hadlay Arrinta Galmudug & Muqdisho. #MuuseSuudi #Galmudug #Muqdisho.
Waxaa dhawaan la filayaa in magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug lagu soo dhiso Baarlamaan cusub uu yeelanayo maamulka halkaasi ka jira, waxaana Baarlamaanka isna sii dooran doonaan Gudoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha. Guddiga Doorashada iyo xalinta Khilaafaadka ayaa hada wada habraaca soo xulista Xildhibaanada cusub ee Galmudug iyo sidii loo soo saari lahaa jadwalka ...
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Cali Gacal ayaa sheegay inay Xildhibaanada Galmudug u codeeyeen Maasaaniyadda lasoo gudbiyey isla markaasna ay hadda wixii ka dambeeyo tahay mid ansax ah. Miisaaniyadda Maamulka Galmudug ayaa waxay sanadkii 2018 aheyd 8 Malyan, waxayna sare u kacday 50% marka la fiiriyo Miisaaniyadda sanadkaan 2020.
Jan 11, 2020 · Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Maamulka Galmudug, ayaa la filayaa maanta oo Sabti ah in lagu dhaariyo Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Munaasabad lagu qaban rabo Magaalada Dhuusamareeb, ayaa lagu dhaarinayaa 83 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, kuwaasi oo shalay liiska ku soo baxay.
Guddigii doorashada uu dhawaan magacaabay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo kaga dhawaaqay liiska xildhibaano ay sheegeen in ay yihiin Baarlamaanka Galmudug. Xildhibaanada looga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo aya agaaraya 68-Xildhibaan, waxaana la sheegay in Xildhibaanadan iyo kuwa harsan ay dhawaan soo dooan doonaan Gudoomiye ...
Jan 10, 2020 · Guddiga farsamada maamul dhisidda Gamudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamanka Galmudug oo muddo la sugayey. Liiskan ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20-ka xildhibaan ee Ahlu-Sunna iyo 63 xildhibaan oo ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha.